healthy – Healthy Life Journal
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သိုင်းပညာလေ့လာသင်ယူလိုတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်က သိုင်းဆရာကြီးဆီသွားပြီး- “ကျွန်တော် ဆရာ့ဆီမှာ သိုင်းပညာကို ကြိုးကြိုးစားစား၊ လေးလေးစားစားနဲ့ သင်ယူပါမယ်၊ ဆရာ့လိုသိုင်းဆရာ အကျော်အမော်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်အချိန်ဘယ်လောက်ယူရမလဲ”လို့ မေးလိုက်ပါသတဲ့။ သိုင်းဆရာကြီးက “၁၀နှစ်ကြာမယ်” ဆိုပြီး ဖြေလိုက်ပါတယ်။ လူငယ်က...
အချိန်နှစ်စက္ကန့်ကြာတိုင်း အသက် ၃၀ နဲ့ ၇၀ ကြား လူတစ်ဦးဟာ အောက်ပါအခြေအနေတွေနဲ့ အရွယ်မတိုင်ခင် သေဆုံးနေကြပါတယ်။ နှလုံးရောဂါနဲ့ အဆုတ်ရောဂါများ လေဖြတ်ခြင်း ကင်ဆာရောဂါ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ စတာတွေနဲ့ အရွယ်မတိုင်ခင် သေဆုံးနေကြပါတယ်။ Ref:WHO
ခူနာ ခေါ်သော ပြည်တည်နာ (Abscess)
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— Q. ဆရာခင်ဗျာ ကျနော့်အမျိုးသမီးမှာ ခူနာရောဂါကို ခံစားနေရပါတယ်။ ဟိုအရင် သူငယ်စဉ်အချိန်မှာလဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျနော်သိချင်တာက အဲဒီရောဂါက ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်စေလဲဆိုတာရယ်၊ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာရယ်၊ ဘယ်လိုကုသပျောက်ကင်းနိုင်သလဲဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါ။ နောက်ထပ် အဒီရောဂါကို အမြစ်ပြတ်အောင်...
———၊ ကိုထက် ၊——— ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက အမျိုးသားအများစုဟာ သုက်ကောင်အရေအတွက် လျော့နည်းနေကြကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုက်ကောင်အရေအတွက် ထုတ်လုပ်မှု အားကောင်းစေဖို့ရာ လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဆင့် (၁) ဆေးလိပ်နှင့်အရက် ရှောင်ပါ ဆေးလိပ်နဲ့အရက်ဟာ သုက်ကောင်အရေအတွက်ကို ထိခိုက်စေရုံသာမက...
သက်ရှည်ကျန်းမာစေရန် လိုက်နာသင့်သော ရိုးစင်းလွယ်ကူသည့် နည်းများ
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— ကျန်းမာရေးကို အလေးထား ဂရုစိုက်တာကြောင့် သက်ရှည်ကျန်းမာတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သက်ရှည်ကျန်းမာတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ရာ လူတိုင်း နေ့စဉ်လိုက်နာသင့်တဲ့ အလွယ်နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံ စတဲ့ သဘာဝအပင်ထွက်...
—၊ ပါမောက္ခဦးမောင်မောင်ခိုင် (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. အခုခေတ်မှာ နားကြပ်တပ်ပြီး ဖုန်းနဲ့ သီချင်းနားထောင်တာကြောင့် နားအူကြတယ်။ နားအူတာက တခြားဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့်ကော ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ဖုန်းနဲ့ နားကြပ်တပ်ပြီး သီချင်းနားထောင်လို့...